Live လွှင့်ရင်း တင်ပါးကိုလှန်ပြလို့ အမေဆူတာခံရတဲ့အကြောင်းပြပြလာခဲ့တဲ့ မိုးအောင်ရင် – Cele Top Stars
Live လွှင့်ရင်း တင်ပါးကိုလှန်ပြလို့ အမေဆူတာခံရတဲ့အကြောင်းပြပြလာခဲ့တဲ့ မိုးအောင်ရင်
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်အောင် ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ် ကားပေါင်းများစွာတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားသူကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသားချောလေး မိုးအောင်ရင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်ဆန်ဆန်ဖက်ရှင်လေးတွေကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်တတ် တာကြောင့်လည်း မိန်းကလေးပရိသတ်တွေက ကြွေနေကြတာပါ။
မိုးအောင်ရင်ဟာ လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ မရှိသေးတာကြောင့် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုကို လုပ်ကိုင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းမီဒီယာတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမှာတော့ မိုးအောင်ရင်က Live မှာဖင်လှန်ပြလို့ အမေဆူခံရတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိုးအောင်ရင်က ” “Live မှာ ဖင်လှန်ပြခဲ့မိလို့ အမေက စိတ်ဆိုးပြီး Live ထပ်မလွှင့်ဖို့ အထိ ပြောခံရတယ်။ အမေ နဲ့ သိပ်စကား မပြောရဲသေးဘူး။ Live မှာ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ Comment တွေ ပြန်ဖတ်ပြီး ပျော်ရပါတယ်။ ကိုယ် ရှက်လိုက်ရတာက တစ်ခဏပါ.. ပရိသတ်တွေ ကျေနပ် သွားရင် ပျော်ပါတယ်” လို့ ပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
“ကျွန်တော်က Live. လွှင့်ရင်း ဒီ Post က 2K ရရင် ဖင်ကိုင်ပြမယ် ဆိုပြီးနောက်လိုက်တာပါ အဲဒါကို3K လောက်အထိ ချက်ချင်းကြီး တက်သွားတော့ ကွိုင်ပြီဆိုပြီး တွေးလိုက်သေးတယ် နောက်တော့ ဖင်ကိုင်ပြတာပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာ တော်ကြာ ပရိသတ်တွေ စိတ်ဆိုးနေပါဦးမယ်ဆိုပြီး လုပ်ဖြစ်သွားတာပါလို့ ဆက်လက်ပြောပြလာခဲ့တာပါ… ။မိုးအောင်ရင်ကတော့ Live မှာဖင်လှန်ပြလို့ အမေဆူခံရတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်​နော် အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
Photo Credit – Moe Aung Yin
ခဈြပရိသတျကွီးရေ ဆယျစုနှဈကြျောတိုငျအောငျ ရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယိုဇာတျ ကားပေါငျးမြားစှာတှငျ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ တဈခဲနကျ အားပေးမှုတှကေို ရရှိထားသူကတော့ သရုပျဆောငျ မငျးသားခြောလေး မိုးအောငျရငျပဲ ဖွဈပါတယျ။လူငယျဆနျဆနျဖကျရှငျလေးတှကေို ရှေးခယျြဝတျဆငျတတျ တာကွောငျ့လညျး မိနျးကလေးပရိသတျတှကေ ကွှနေကွေတာပါ။
မိုးအောငျရငျဟာ လတျတလော အနုပညာလှုပျရှားမှုတှေ မရှိသေးတာကွောငျ့ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေး လုပျငနျးတဈခုကို လုပျကိုငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ယခုရကျပိုငျးမီဒီယာတှဆေုံ့မှုတဈခုမှာတော့ မိုးအောငျရငျက Live မှာဖငျလှနျပွလို့ အမဆေူခံရတဲ့အကွောငျး ပွောပွလာခဲ့တာဖွဈပါတယျမိုးအောငျရငျက ” “Live မှာ ဖငျလှနျပွခဲ့မိလို့ အမကေ စိတျဆိုးပွီး Live ထပျမလှငျ့ဖို့ အထိ ပွောခံရတယျ။ အမေ နဲ့ သိပျစကား မပွောရဲသေးဘူး။ Live မှာ ပရိသတျတှေ ရဲ့ Comment တှေ ပွနျဖတျပွီး ပြျောရပါတယျ။ ကိုယျ ရှကျလိုကျရတာက တဈခဏပါ.. ပရိသတျတှေ ကနြေပျ သှားရငျ ပြျောပါတယျ” လို့ ပွောလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ
“ကြှနျတျောက Live. လှငျ့ရငျး ဒီ Post က 2K ရရငျ ဖငျကိုငျပွမယျ ဆိုပွီးနောကျလိုကျတာပါ အဲဒါကို3K လောကျအထိ ခကျြခငျြးကွီး တကျသှားတော့ ကှိုငျပွီဆိုပွီး တှေးလိုကျသေးတယျ နောကျတော့ ဖငျကိုငျပွတာပဲဘာမှမဖွဈပါဘူးကှာ တျောကွာ ပရိသတျတှေ စိတျဆိုးနပေါဦးမယျဆိုပွီး လုပျဖွဈသှားတာပါလို့ ဆကျလကျပွောပွလာခဲ့တာပါ… ။မိုးအောငျရငျကတော့ Live မှာဖငျလှနျပွလို့ အမဆေူခံရတဲ့အကွောငျး ပွောပွလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ​နျော အဆုံးထိဖတျရှုပေးကွတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျပါတယျနျော။
အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်မှာ အရေးပါတဲ့ ဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ဂဋုန်ဦးစောနေရာမှာသရုပ်ဆောင်ပြီး ရရှိခဲ့တဲ့ အနုပညာကြေး (၂၅)သိန်းကို အောင်ဆန်းရုပ်ရှင် ပြန်လည်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကိုဥက္ကာကျော်
အမှတ်မထင် ရေစီးနေတဲ့ ရေတံခွန်မှာပြုတ်ကျသွားတဲ့ မောင့်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ပရိသတ်တွေဆီချပြပြီး ဆေးထိုးလာတဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူ